किसमिसले पूरा गर्छ शरीरमा रगतको कमी, यस्ता छन् यसको अचम्मैको फाइदाहरु ! – Yuwa Aawaj
चैत्र ३, २०७७ मंगलबार 1014
किसमिस एक स्वादिष्ट र व्यापक रूपमा लोकप्रिय विविधता हो। सुख्खा फलमा समावेश किसमिस स्वाद र विभिन्न गुणहरुले भरपूर छ। जब अंगुरलाई विशेष रूपमा सुकाइन्छ, यसलाई किसमिन भनिन्छ। अंगुरको लगभग सबै गुण किसमिसमा पाइन्छ। यो दुई मुख्य प्रकारको हुन्छ, रातो र कालो।
किसमिस पनि सुनौलो रंग वा हरियो रंगमा पनि हुन्छ किसमिस स्वास्थ्यको लागि निकै लाभकारी हुन्छ। वास्तवमा किसमिस मिठो स्वादको कारण क्यान्डीहरू र चकलेटको लागि उपयुक्त विकल्प हो। किसमिस काँचो नै खान सकिन्छ वा हलुवा पकाउन, खीर पकाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो व्यापक रूपमा डेसर्ट, कुकिज, र स्वादिष्ट पकवानमा प्रयोग गरीन्छ।
अन्य पोषक तत्व :किशमिश खानेले रगत बढ्छ र यो मुटुको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। किसमिस उर्जा र अन्य आवश्यक पोषक तत्वहरूको स’मृद्ध स्रोत हो। किसमिसमा ७२ % चिनी हुन्छ, जस मध्ये अधि’कांश फ्रुक्टो’ज र ग्लुकोज हुन्छ ।यसमा करीव ३ % प्रोटीन ३.७ %-६.८ % फाइबर समावेश छ। किसमिसमा केही एन्टि क्सिडेन्टहरू पनि हुन्छन् जस्तो कि प्रूनस र खुबानी। यसले ताजा अंगुर भन्दा कम भिटामिन सी समावेश गर्दछ। यसले कुनै पनि कोले’स्ट्रोल समावेश गर्दैन।
क’ब्जियत र पाचन तन्त्र :कब्जि’यत, एसिडिटी र थकान जस्ता पेटका समस्याहरूका लागि किसमिस धेरै फाइदाजनक हुन्छ। किसमिस रेचकको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले पेटमा गएर पानी अवशोषित गर्दछ, जसको कारणले यो फुल्छ र क’ब्जियतबाट आराम दिन्छ। पाचन प्रणाली सम्बन्धि समस्याको लागि पनि यो निकै लाभदायक हुन्छ।
दैनिक रूपमा बिहान किसमिस पानी पिउँदा तपाईंलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छ। प्रत्यक दिन बिहान यसको सेवन गर्नाले क’ब्जियत, ए’सिडिटी र थकानबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। किसमिसमा उपस्थित फाइबरले वि’षालु पदार्थहरू ग्यास्ट्रोइं’टेस्टाइनल ट्र्याक्ट’बाट बाहिर फाल्न मद्दत गर्दछ।
एनीमिया:किसमिसमा आइरन प्रचुर मात्रामा समावेश हुन्छ। किसमिसको सेवनले शरीरलाई एनीमियासँग लड्न शक्ति दिन्छ। किसमिसले रगत बनाउन भिटामिन बी क’म्प्लेक्सको आवश्यकता पनि पूरा गर्दछ। किशमिशमा अवस्थित कपरले रगतमा रातो रक्त कोषहरू बनाउने काम गर्दछ।
ज्वरो :किसमिसमा फेनोलिक पाइथोन्यु’म्यूट्रियन्टहरू पाइन्छ जसले जीवाणुनाशक, एन्टि बायोटिक र एन्टी-अक्सीडेन्ट तत्व समावेश गर्दछ, जसले ब्याक्टेरिया सं’क्रमण र भाइ’रससँग लडेर छिट्टै ज्वरो’लाई निको पार्छ।
आँखाको लागि :किसमिसमा एन्टी-अक्सी’डेन्ट गुण हुन्छ जसले आँखाको फ्रि रेडिकल विरु’द्ध लड्न मद्दत गर्दछ। किसमिसको सेवनले मो’तियाबिन्द, आँखाको कम’जोरी, मांसपेशीको क्षति आदि हुँदैन। यसले भिटामिन ए, ए-बीटा क्या’रोटीन र ए-क्यारोटीनोइड इत्यादि समावेश गर्दछ जुन आँखाको लागि राम्रो हो।
Prevग्रेटर नेपालको कुरा उठ्दा बेलायत सरकारले कसरी हेर्दैछ?(भिडियो सहित)
Nextयीनै हुन शिक्षकको कु’टाइबाट मृ’त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी ।